Azia Atsimo · Avrily, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsimo · Avrily, 2019
Tantara mikasika ny Azia Atsimo tamin'ny Avrily, 2019
Azia Atsimo: Tsy fananana Asa, Fikambanan-drelijiozy, Valala, Mpangataka Mpanefoefo Ary Fandriana Fanampiny An'ireo Blaogera
Bangladesh 30 Avrily 2019
Azia Atsimo, faritra iray amin'ireo mahantra indrindra erantany. Tsy fananana asa no iray amin'ireo olana goavana ho an'ireo firenena rehetra ao amin'ny faritra. Manoratra ampahany iray mikasika ny asa ao Azia Atsimo ny South Asia Biz. Dinihany ireo vavahadin-tserasera momba ny asaan-tambajotra any Nepal, India, Bangladesh, Pakistana, ary Sri Lanka.
Shina: Mampiahiahy ny mpisera an-tserasera ny fikasan'ny governemanta hanitatra ny fanaraha-maso amin'ny Aterineto
Shina 30 Avrily 2019
Nampiahiahy ny mpisera Shinoa amin'ny fanombohan'ny onjam-panentanana vaovao hanenjehana ny mpanohitra an-tserasera ny andian-dahatsoratra maromaro navoakan'ny zoro fampahalalam-baovaom-panjakana izay manamarina ny fisoratana ny tena anarana an-tserasera sy ny famoretana ny heloka an-tserasera.
Mampanontany ny fepetra noraisin'ny governemanta Sri Lankey taorian'ny daroka baomba tamin'ny Paska: Manampy ny media sosialy sa manimba?
Sri Lanka 29 Avrily 2019
Ny fanapahan-kevitra haingana hanakana ny fidirana amin'ireo sehatra ireo dia milaza fa, amin'ny governemanta Sri-Lankey, mety hanampy trotraka ny fiharatsian'ny toe-draharaha ireo sehatra media sosialy ireo.
Bahrain: Ao amin'ny tany misy lalàna
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 27 Avrily 2019
Gaga ilay bilaogera Bahrainita Khalid tamin'ny fanehoan-kevitra nataon'ny governemanta - taorian'ny namoahan'ny Minisitry ny Atitany baiko handràra ny famoahana fahazoan-dàlana ho an'ny mpiasa avy any Bangladesh - ao amin'ny firenena izay mirehareha amin'ny maha-demokrasia azy amin'ny lalàna sy lalàmpanorenana ao an-toerana.
Afovoany Atsinanana: Malahelo noho ny fanafihana tany Mumbai
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Avrily 2019
Ao anatin'ny alahelo sy ny fahatairana tamin'ny fanafihana an'i Mumbai, mametraka fanontaniana marobe ny bilaogera manerana ny tontolon'ny Arabo.
Nepal 24 Avrily 2019
Efa taonjato maro ireo Madhesi no natao anjorom-bala. Ao anaty fitroarana izy ireo ankehitrin, izay tsapa ho toy ny ampahany faharoa eto amin'izao tontolo izao manetsika ny Revolisiônan'y Aprily [...] Raha ampahany ao anatin'i Nepal i Madhesh, dia nahoana ireo Madheshis no tsy omena vintana ho afaka hanao raharaha miaramila?
Raràn'i India ny TikTok an'i Shina fa “manimba kolontsaina sy mandrisika pôrnôgrafia”
India 23 Avrily 2019
Noraràna ny olona ao India tsy hitroka ny TikTok, fampiasa iray miorina ao Shina malaza hizaràna lahatsary haingana.
Miady hevitra ny blaogy Bangla: Saddam sa i Bush? – iza no meloka indrindra?
Bangladesh 23 Avrily 2019
Nifarana tamin'ny vaovao lehibe mikasika ny famonoana an'i Saddam Hussein tany Iràka ny taona 2006. Sary maro momban'ny fanantonana azy nohita tao amin'ny Aterineto, izay nahaketraka olona maro. Nangotraka fihetseham-po maro nanoloana ilay zava-nitranga ny tontolom-blaogy.
Pakistan: Horohorontany tany Baluchistan
Pakistana 23 Avrily 2019
Ny Alarobia maraina, nanozongozona ny ampahany atsinanan'i Pakistana ny horohorontany tamin'ny maridrefy Richter 6.5. Ziarat, faritra saro-dalana any Baluchistan no faritra tena voakasika mafy. Niteraka fahafatesan'olona maherin'ny 300, naratra an-jatony ary an'arivony tsy manan-kialofana lasa monina ankalamanjana ao anatin'ny ririnina mamirify izany.
Daroka baomba tamin'ny fiangonana sy hotely maro niteraka horohoro tao Sri Lanka
Sri Lanka 22 Avrily 2019
Anjatony ny maty sy maratra tamin'ilay andiam-pipoahana baomba tsara omana tao Sri Lanka. Nambaran'ny governemanta ny hametrahana fanaronan'afo mandritra ny 12 ora ary notapahina ny media sosialy.